Kunokuba kungcono ukuhlamba iipilisi?
Ukuze ungalonakalisi impilo yakho kunye nempembelelo yonyango iphumelele, kufuneka usebenzise eli liyeza ngokuchanekileyo. Ngaphambi kokuba uthathe ipilisi, funda i-annotation, kwaye ukuba ingacacisiwe xa uthabatha iyeza, kula maxesha uthathe iipilisi kwisiqingatha seyure ngaphambi kokutya nokusela amanzi ubuncinane isiqingatha seglasi yeqondo lokushisa. Uninzi lweentambo kunye nokunyonywa kuthathwa ngaphambi kokutya.
Kunokuba kuyimfuneko ukuhlamba amayeza?
Awunakuyiphuza iyeza kunye ne-carbonated sweet drinks okanye ijusi, ukuze kungabikho mpendulo engathandekiyo esiswini. Ukusebenzisana okungathandekiyo kwerayisi yesithelo segrisi kunye negrapefruit kunye neziyobisi, ngenxa yokuba izinto eziqulethwe kwisiqhamo se-grapefruit, ungavumeli ukuba isibindi sihlukane sibe ngamacandelo amancinci amayeza. Amachiza amaninzi awadibaniswanga nejusi ye-grapefruit, i-antineoplastic, iziyobisi zenyama, izidakamizwa, izigulana kunye nezinye. Ngexesha lokufumana amacwecwe, kungcono ukuba ungadli izithelo zomvini.
Awunakuyiphuza imithi ngamanzi amaminerali okanye i-soda e-sweet, kuba iqukethe i-carbon dioxide kwaye ngenxa yokuthatha amachiza ayo kunye ne-acidity yenguqu.
Ubisi abufanele ukusela i-caffeine, i-ascophene, i-tsitramon, i-antibiotics, kuba ubisi aluhambisani nefuthe leziyobisi, kunye nomxholo we-caffeine. Akunakwenzeka ukusela ubisi xa uphethwe i-anemia, ubisi aluvumelekanga ukulungiswa kwezinto zesebe. Iimvuno zinciphisa umphumo we-nosping, antibiotics kunye nokwandisa iipropati ze-antifungal agents.
Ezi macwecwe zithathwa emva kokutya:
I-hormone ye-Steroid, i-indomethacin, i-metronidazole ithathwa.
Izidakamizwa ezichasayo, ezinjengamalungiselelo e-iodine, i-nitroxoline, i-reserpine, i-trichopolum, i-indomethacin, i-butadione, kufuneka ihlanjwe nge-rice umhluzi, i-jelly, ubisi.
Zonke iipilisi ezibandayo, iintloko - i-ascophene, i-aspirin, kufuneka ihlanjwe ngobisi okanye ngamaminerali.
Iiphilisi ze-antibacterial ethazol, i-sulfademitoxin, i-biseptol zihlanjululwa nge-alkaline isiselo.
Iipilisi ze-Hormonal - i-polcortolone, i-prednisolone ihlahlwe ngobisi.
Ii-enzyme ze-digestive zithathwa ekuqaleni nasekudleni.
Ama-Multivitamine atywala ngexesha lokutya.
Iifelesi ze-gelatin azihlanganiswa nodongeni lwesisu, zithathwa, zihleli okanye zimi zihlanjwe ngamanzi ngobuninzi.
I-Clopheline ikhawuleza ihlehlise uxinzelelo lwegazi, kufuneka ithatyathwe phantsi.
Intliziyo yehla iyakuthatha, iqhube kwisinqutyana seswekile ecocekileyo.
Iipilisi ze-mucutin ekukhwehleleni ziza kusebenza ngakumbi xa uzihlalisa emanzini amnandi kwaye uphuze iyure ngaphambi kokutya.
Ii-antibiotics zithathwa ngaphambi, emva, nangethuba lokutya, ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela kwincwadi.
Ukutya kunye nokutya, i-panzinorm, i-mezim, ezi nkunkuma ziphucula ukutya kokutya.
Imizuzu engama-15 ngaphambi kokutya, izixhobo ezichasayo-ezivuthayo, ezingekho-steroidal, i-analgesics ithathwa.
Ukulungelelaniswa kwentshukumo, izilwanyana zonyango, izicatshulwa zezityalo zithathwa emva kokuba amazinyo ahlambuluke kwaye umlomo uyahlanjululwa, ngokokuba akukho nxu lumaniso lwezinto zasemzini ngolwimi, kwaye umphumo uya kuba yinkathazo. Ukuba imiyalelo ayithethi ukuba ukuthatha iyeza, kuthathwa ngaphambi kokutya emaminithini amathathu, okanye iiyure ezine emva kokutya. Akukho nto iya kumisa iyeza ukuba lingasetyenziselwa.
Ngokuphathelele iziyobisi ezinxilisayo, kufuneka zilibaleke ngexesha leyeza kunyango.
Ukulungiswa kwesinyithi kuhlanjwe ngejusi le-orange. Zonke ezinye iyeza kunye neyeza-antibiotics azikwazi ukuhlamba. Phakathi kokutya kwamaminerali, iivithamini kunye neeyi, ikhofi iyilungele ukulinda imizuzu engama-20. Uninzi lwamacwecwe ahlamba ngamanzi ebhotile okanye abilisiwe kwi-100 ml. Ukulungiselela kunye namayeza okulwa ne-calcium kunye ne-caffeine ahambelani ne-soda nobisi. Ijusi ye-currant emnyama kunye neidiya zinciphisa ukutsalwa kwe-ibuprofen, i-amidopyrine, i-furosemide.
Ngokwahlukileyo, kuyimfuneko ukuthetha ngeziphuzo ezifana nekhofi kunye neyeyi. I-Tea iqulethe i-tanin, i-tannin, enceda ukwenza ama-insuluble compounds. Ikofi iqukethe i-cafeine, inxulumene neyeza linika iziphumo ezingalindelekanga, ngakumbi xa zisetyenzisiweyo kunye neentsimbi eziqabulayo. Musa ukusela utywala.
Ukubuyisela i-intestinal flora kuthathe iipilisi ezifana ne-hilak-forte, linex, baktisubtil, i-lactobacterin, zithathwa ngeyure 1 ngaphambi kokutya kwaye zihlanjwe ngamanzi apholileyo.
I-Antiulcer kunye ne-antacid agents - maalox, gastam, Almagel ithathwa isigamu seyure ngaphambi kokutya okanye emva kokutya ngeyure enye.
Izidakamizwa zokudwelisa zihanjelwa ngokukhawuleza ngaphambi kokutya.
I-Kiselele iipilisi zamapilisi erythromycin, i-oletetrin, ngoko i-kissel ivula ipilisi, kwaye iyeza linefuthe elincinci kwi-mucosa esiswini. Iibhulethi zisela phambi kokutya.
Isixhobo esiyingqayizivele sokuhlamba iipilisi ngamanzi. Akuyi kuba kubi xa uthela i pilisi ngamanzi. Kodwa kukho iimeko xa kukuphuze ukusela kunye nezinye izilwanyana. Ngokomzekelo, ngamanzi e-alkaline- "Essentuki" inombolo ye-4 kunye nenombolo 17 ihlanjwe ngeepilisi ze-aspirin kunye ne-erythromycin.
Umzimba ufumana amacwecwe kunye namayeza ngexesha elifanayo, kufuneka uhlale etafileni ngexesha kwaye uphile kwi-regime. Impilo kuwe!
IiVithamini kunye nendima yabo emzimbeni womntu
IiVithamini ebomini bomntu
Inkqubo yesenzo se-drug dysport
Iziyobisi ezithathwe ngumntu
L-carnitine: isicelo, ukusebenza, iziphumo ezibi
Iingqayi zenyama yenkukhu zahlambuluka ngamanzi
Ukufunda ukuthetha nabanye abantwana
I-eye eye syndrome: iindlela zokulwa
Ukuthathela ingqalelo kwindoda?
Iindlela zokuhlamba iinwele
Ibhinqa lidala kunomntu olwalamano
Indlela yokufumana umhlobo ofanelekileyo